Momba anay | WANXIE POWER TECHNOLOGY CO., LTD
Wanxie Power Technology Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny renivohitry ny herinaratra ao Shina --Yueqing, Zhejiang. Mikaroka sy mamolavola, mamokatra ary mivarotra fitaovana herinaratra 、 fampiasa amin'ny tariby 、 boaty metatra, fitaovana feno, bobongolo fanodinana tosika avo sy ambany ary vokatra hafa. Maherin'ny 100 andiany ary mihoatra ny 1000 ny karazany. Orinasa teknolojia avo lenta nasionaly, orinasam-teknolojia herinaratra herinaratra, fanjakana Grid, orinasam-pifandraisana haingam-pandeha avy any Sina.
Ny orinasa dia manana hery ara-teknika matanjaka, teknolojia famokarana mandroso, fitaovana famokarana kilasy voalohany andiana fitaovana fitiliana sy mekanika, ara-batana sy simika, laboratoara metallographic. Rafitra fitantanana henjana famokarana. Fiantohana rafitra fitantanana tonga lafatra, miaraka amin'ny vokatra matanjaka, famolavolana bobongolo ary ny fahaiza-manao amin'ny famolavolana. Ny orinasa dia nandalo ny fanamarinana ny kalitao, ny rafitra fitantanana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny asa ary nahazo laza tsara teo amin'ny indostria mitovy amin'ny vokatra avo lenta, mitombina vidiny sy laza tsara.
Fepetran'ny indostria, marika efa an-jato
Ny mpanjifa aloha, ny fiaraha-miasa, ny fankasitrahana ary ny fanoloran-tena, ny fanovana tongasoa, ny marina sy azo itokisana, miabo, ny mpanjaka ny vokatra
Fitsipika momba ny serivisy
Hatsarao ny serivisy aorian'ny fivarotana sy ny fahafaham-pon'ny mpanjifa.
Miaraka amin'ny fahatsoranay, ho takalon'ny fitokisanao.
Kalitaon'ny fahavelomana, fanavaozana ary fampandrosoana.
Tazomy ny tombotsoan'ny mpanjifa, araho ny fitsipiky ny fanompoana tsara.
Teny filamatra miasa
Ny toetra no mamaritra ny antsipiriany rehetra momba ny fahombiazana na ny tsy fahombiazana.
Ny tanjona dia mamaritra ny lalana, ny hetsika no mamaritra ny ho avy.
Rafitra fitantanana 9S
Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, fiarovana, famonjena, serivisy, fahafaham-po
Tamin'ny 4 Aogositra 2011, natsangana tamin'ny fomba ofisialy ny wenzhou Wanxie Power Technology Co., LTD
Ny orinasa dia manana ny sary ofisialy tamin'ny taona 2013.ary nahazo ny "National Industrial Production Production Licence"
3.Ny renivohitra voasoratra dia nitombo hatramin'ny 3.05 tapitrisa ka hatramin'ny 20,31 tapitrisa tamin'ny taona 2014.Ny anaran'ny orinasa dia novaina tamin'ny "Wenzhou Wanxie Power Technology Co., LTD" ho "Zhejiang Wanxie Power Technology Co., LTD".
Tamin'ny 2015, nifindra toerana ny orinasa avy ao amin'ny Village Michuan, Baishi Town, Yueqing City ka hatramin'ny No. 128, Jingwu Road, faritra fampandrosoana ara-toekarena Yueqing
Tamin'ny 2016, ny renivohitra voasoratra dia nitombo hatramin'ny 20,31 tapitrisa yuan ka hatramin'ny 51,31 tapitrisa yuan. Nohavaozina ho "Wanxie Power Technology Co., LTD" ny anaran'ny orinasa .Nankatoavina koa ny famindrana toerana sy ny fanoloana ny National Industrial Licence.
Tamin'ny vanim-potoana faha-7 taonan'ny orinasa tamin'ny taona 2018 dia nividy zavamaniry ho azy ny orinasa (rakotra velarana 16,2 mu, miaraka amin'ny velaran'ny fananganana 8000 metatra toradroa), izay tanjona vaovao, teboka fanombohana vaovao, vaovao sehatra, ary lalana vaovao.
Rafitra fizarana stratejika ho avy, modely amoeba, hamoronana sehatra raharaham-barotra iraisana. Manantena ny fandraisan'anjaranareo amin'ny famoronana rahampitso miaraka tsara izahay